အင်း | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
နေအိမ်→Categories မန္တလေး→အင်း	123 >>
Category Archives: အင်း
The Yadana Hsemee Pagoda Complex isasmall group of pagodas in Inwa (အင်း) မြစ်ဆီသို့ Bagaya ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၏မြောက်အမေရိကမှတည်ရှိပြီး. မြင်းလှည်းယာဉ်မောင်းများ၏အများစုမှာဤလှပသောနည်းနည်းရှုပ်ထွေးမှာကိုရပ်တန့်. The ancient ruins … ဆက်ဖတ်ရန် →
Posted in, အင်း
The Nanmyin Watchtower in Inwa (အင်း) အထဲတွင်အမရပူရသို့ပြောင်းရွှေ့ခင်အထိဤနေရာတွင်ရပ်တစ်ချိန်ကနန်းတော်ဖြစ်နေဆဲကြောင့်တော်တော်များများအားလုံးဖြစ်ပါတယ် 1841 တမြို့လုံးကပျက်စီးခဲ့သည်သုံးနှစ်လွန်ပြီးမှ 1838 ငလျင်. The Nanmyin … ဆက်ဖတ်ရန် →
le Htat ကြီး Payan Beverage ထုတ်ယူခြင်း (သို့မဟုတ်လေး Htat ကြီး Payan Beverage ထုတ်ယူခြင်း) အင်း၏အရှေ့တောင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသည် (အင်း). This place is not normally included in any horse cart rides as it isabit too far to include in … ဆက်ဖတ်ရန် →